ZITHATHELE PT Tupolev Tu-154B-2 v9.6.1 FS2004 - Rikoooo
Usayizi 45.9 MB
Play 13 115
Umbhali: Project Tupolev
Enye inguqulo etholakalayo ye FSX et P3D Chofoza lapha
Omunye izwi: "Hewu !"Ngeke ubone i add-on lapho sekulingisa kuyinto kunini okusezingeni kangaka ngokushesha, ngokuqinisekile athuthukile kakhulu futhi kuyinkimbinkimbi kunazo zonke freeware add-on for FS2004. A wobuciko ukuthi kudingeka siyinake. WokuFunda ngokusobala kudingekile ngoba ngeke enta taba ngokwakho umshayeli lo mshini ngaphandle ibhukwana ... Nokho, okujabulisa!
I Tupolev Tu-154 (Russian: Туполев Ту-154) (NATO ikhodi Careless) iyinhlangano Soviet airliner trijet yakhelwe 1960s maphakathi nawo. ekukhiqizweni indiza laqedwa ngo February 2013
Isiqophi Engines Qala Up
Tupolev TU-144 ephelele iphakethe 2.0 FS2004